नेपाल आज | हामी पार्टीबाटै अपमानित र उपेक्षित भएका छौं (भिडियो)
हामी पार्टीबाटै अपमानित र उपेक्षित भएका छौं (भिडियो)
काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपालको सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासमा क्रियाशील र परिचित नाम होः तीर्थ थापा । थापा चलचित्र निर्देशक, कलाकार, निर्मातामात्रै नभएर राजनीतिमा सचेत व्यक्ति पनि हुन् । नेपाली कांग्रेसलाई एक शुभेच्छुक संस्था आवश्यक पर्छ भनेर उनकै नेतृत्वमा नेपाल सांस्कृतिक संघ स्थापना भएको थियो । सो संघको दोस्रो कार्यकालका सभापति पनि थापा छन् ।
थापा जति सक्रिय, सरल र मृदुभाषी छन्, देशको परिवेश र विशेषत नेपाली कांग्रेसको खस्कदोँ शाखमा बढी चिन्तित पनि छन् । सभापति थापालाई मुख्य चिन्ता सांस्कृतिक क्षेत्रमा क्रियाशील कलाकारहरुको सामाजिक सुरक्षामा छ । उनी भन्छन्, ‘कलाकारलाई गहना मात्रै मानिन्छ । मन लाग्दा लगाउने, मन नलागे फाल्दिने गहना बन्न कलाकार चाहँदैनन् । जीवनभर काम गरेपछि उत्तराद्र्धमा सामाजिक सुरक्षा कलाकारका लागि पनि बलियो हुनुपर्छ ।’
सभापति थापा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विश्वासपात्र थिए । कोइरालाको निधन भएपछि उनी सबैसँग निकट नै छन्, तर कसैसँग बिशेष भन्ने छैन । नेताको घर धाउने प्रवृतिबाट उनी वाक्क छन् । भन्छन्, ‘नेताहरुको दास बन्ने गलत चलन बसेको छ । नेताहरुले पनि आफ्नो घरमा को बढी आयो, कसले कति चाकडी गर्यो त्यसका आधारमा मूल्यांकन गर्छन् । गरेको कामको मतलव छैन ।’
नेपाल सांस्कृति संघको दोस्रो अधिवेशनबाट थापाको सभापति पदले निरन्तरता पाएको हो । तर उनी निर्वाचित भएका भने होइनन् । सहमतिका आधारमा थापालाई सभापति बनाइयो । एक लोकतान्त्रिक पार्टीको शुभेच्छुक संस्थाले निर्वाचन छाडेर किन सहमति तिर गयो ? भन्ने प्रश्नमा थापा भन्छन्, ‘वास्तवमा चुनाव हुनु पथ्र्यो । पार्टीले हस्तक्षेप गरेको थियो । मलाई सभापति बनाउँदा अर्को सभापतिको उम्मेदवारले रुनु पर्ने अवस्था आउनु नै हुँदैन थियो । म सभापति त भएँ, तर अहिलेसम्म मैले प्रमाणपत्र पाएको छैन । पाँच जना पदाधिकारी मात्रै छौं । यतिले के काम गर्ने ?’
दोस्रो कार्यकालका लागि चयन भएपछिको एक वर्ष बितिसकेको छ । यो एक वर्ष केही काम गर्न नपाई बितेकोमा थापाको गुनासो छ । अबको दुई वर्ष काम गर्ने इच्छा छ तर त्यसका लागि वातावरण नभएको उनी बताउँछन् । सभापति थापा भन्छन्, ‘अहिलेसम्म प्रमाणपत्र पाएको छैन । कार्यसमितिले पूर्णता पाएको छैन । काम गर्न गाह्रो भएको छ । ’
थापा थप्छन्, ‘म सभापति हो भने मलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनूस्, हामीलाई दास नबनाउनूस् भन्दै आएको छु । पार्टीले यो शुभेच्छुक संस्थालाई बन्देज बनाएको अवस्था छ । ’
कांग्रेस पार्टीको शुभेच्छुक संस्था भएर पनि कांग्रेसबाटै अपमानित र उपेक्षित हुनु परेको तीतो पोख्छन् थापा । अघिल्लो सरकारका सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सांस्कृतिक संघलाई एक वचन नसोधी चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा राप्रपा कोषाध्यक्ष उद्धब पौडेलकी पुत्री निकिता पौडेललाई नियुक्त गरेका थिए । सो प्रशंगमा सभापति थापा भन्छन्, ‘हामी कति अपमानित र उपेक्षित छौं भन्ने यसबाटै पुष्टि हुन्छ । एक वचन सोधेर राय लिएको भए के हुन्थ्यो होला त ? के चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष हुने हैसियत कांग्रेसका कुनै सांस्कृतिककर्मीमा थिएन होला त ? ’
चुनावमा कांग्रेसको पराजयपछि देखिएको आरोप प्रत्यारोपमा पनि थापाको तिखो टिप्पणी छ । भन्छन्, ‘आफै टिकट बाँड्नु हुन्छ । अझै आफै टिकट लिनु हुन्छ । चुनाव लड्न जानु पनि हुन्छ । अनि हारेपछि अरुलाई आरोप लगाउनु हुन्छ । यो राम्रो शैली होइन ।’